Simuncu isimo bedilizelwa izindlu - Ilanga News
Home Izindaba Simuncu isimo bedilizelwa izindlu
Simuncu isimo bedilizelwa izindlu
Iziza bazithenga ngemali elinganiselwa ku-R95 000
AYAVEVA amalungu omphakathi athenga iziza eBhekulwandle, eMbumbulu, eThekwini ngokudilizelwa izindlu zawo yizisebenzi zikaMasipala weTheku yize ethi le ndawo akhe kuyona ngeyenkosi futhi kunesivumelwano esithi makumiswe ukudiliza.
IZITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA/ ezinye zithunyelwe
BESISHUBILE isimo izolo ngeSonto eBhekulwandle, eMbumbulu, eThekwini umphakathi obuthukuthele, uhlangene, udingida udaba lokudilizwa kwezindlu ezakhiwe ngemali eshisiwe ngoba kuthiwa zisendaweni kaMasipala weTheku.
ILANGA lithole ukuthi iningi labantu lathenga iziza ngoba kuthiwa indawo ngeyeNkosi uHlengwa, KwaThoyana, eMbumbulu, okuthe abanye besephakathi nokwakha, kwafika izisebenzi zakwamasipala nogandaganda ngeledlule, zathela phansi izakhiwo ezintathu.
Ngokuthola kweLANGA, abantu iziza bazithenga ngemali elinganiselwa ku-R95 000, kuya ngokuthi singakanani. ILANGA liziyele mathupha emhlanganweni womphakathi obuyizolo, abakhulume nalo baveza ukuthi babethenjisiwe ngonyaka odlule ukuthi kuzomiswa ukudilizwa kwezindlu zabantu.
UMnu Sthembiso Zwane naye owathenga isiza kule ndawo, utshele ILANGA ukuthi okwenze bahlangana izolo wukuthi izisebenzi zikamasipala zishilo ukuthi ziyabuya zizodiliza ezinye izindlu.
Uthe okuxakayo wukuthi iziza bazithenga ngoba bazi ukuthi yindawo yenkosi, gwiqiqi, uma sebehlala kuzona batshelwa ukuthi empeleni bakhe endaweni kamasipala.
“Isiza ngasithenga ngo-R95 000 eminyakeni emibili edlule ngabe sengiyakha. Kwathi sesakhile, sabona kufika izisebenzi zikamasipala zizodiliza imizi yabantu.
“Sabhikisha ngonyaka odlule siwumphakathi, savala umgwaqo, kwathunyelwa iziphathimandla ukuzolalela izikhalo zethu. Emuva kwezingxoxo kwavunyelwana ukuthi kuzomiswa ukudilizwa kwezindlu. Sithukile uma sekufika izisebenzi zikamasipala zizodiliza ngeledlule.
“NgoLwesine sihlangane nesinye isikhulu esisehhovisi lemeya, uMnu Mxolisi Kaunda, esithe kasazi ukuthi ngubani okhiphe umyalelo wokuba kudilizwe izindlu. Lesi sikhulu sixhumanile nezinye izisebenzi, kwavela ukuthi umyalelo ubuqhamuka eMnyangweni wezo-kuHlaliswa kwaBantu kuMasipala weTheku.
“Sisitshele ukuthi sizothumela ubhalonyazi (e-mail) simise ukudilizwa kwezindlu. Okusenze sahlangana lapha namuhla, wukuthi kasazi ukuthi sizomisa kanjani ngoba izisebenzi zikamasipala zithe ziyabuya zizodiliza,” kusho yena.
UMnu Mthokozisi Mzobe oyinduna kule ndawo, uthe umhlaba okwakhe kuwona abadilizelwayo ngowenkosi. Uthe eminyakeni edlule inkosi yavuma ukuba kwakhiwe izindlu zomxhaso ngoba ingeke ivimbele intuthuko.
“Inkosi yathi uma kwakhiwa izindlu, kungabe kusawelwa umfula okule ndawo. Kwahamba isikhathi abantu bacela ukwakha kule ngxenye eyasala, yabavumela. Inkinga yaqala ngesikhathi abantu sebakha amakotishi kuleya ndawo, okwasekuphambene nesivumelwano sokuthi indawo ibekelwe abantu abafuna ukwakha imizi.
“Yiwona-ke lawo makotishi adiliziwe, abanye bebakha bashiye izindonga kuphele iminyaka bengaqedile, nazo lezo zindonga
zidiliziwe ,” kusho uMnu Mzobe.
Uthe akekho umuntu odilizelwe indlu asehlala kuyona, kushayeke laba osekunesikhathi eside kumi izindonga nabamakotishi.
Okhulumela ihhovisi leMeya ye-Theku, uMnu Mluleki Mntungwa, uvumile ukuthi bakhona abantu abafikile kwamasipala bayothula izikhalo mayelana nokudilizelwa izindlu. Uthe kuvunyelwane ngokuthi luzolandelwa lolu daba ukuze kutholakale ukuthi kwenzekeni.
“Njengamanje siyaxhumana nomphakathi ukuzama ukuthola ukuthi kwenzekeni, sibheke nokuthi lapho bakhe khona yindawo ekulungele yini ukuthi bangakha kuyona,” kusho yena.
Previous articleIsethembiso sikaDolly kubathandi beChiefs
Next articleLizovela enkantolo iphoyisa ‘elibulale intombi lahlala nesidumbu’